Kukuphi ukuthenga i-testosterone enanathate powder eluhlaza kwi-intanethi? | I-powder powder
/Blog/testosterone , Testosterone propionate/Kuphi ukuthenga i-Testosterone Ukuphucula i-powder eluhlaza kwi-intanethi?
ezaposwa ngomhla 12 / 06 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo testosterone, Testosterone propionate.
Uninzi lwabantu lufuna ukubuza ukuba yintoni inzuzo yeTestosterone Inanthate powder eluhlaza?
I-Testosterone Inanthate Cycles and Uses? Kuphi ukuthenga i-Testosterone Ukuphucula i-powder eluhlaza? Le mibuzo iya kuphendulwa kweli nqaku.
Testosterone Enanthate i powder eluhlaza
I-Testosterone Inanthate powder ifom yexesha elide lokusebenza umzali we-hormone testosterone. Kwimeko enje, i-hormone yomzali inamathele kwi-esanthate ester ukulibazisa ukukhululwa kwigazi ngeentsuku eziliqela.
Testosterone Enanthate i powder eluhlaza Imiqulu kunye nokuSebenza
I-Testosterone Inanthate powder eluhlaza Iimjikelezo ziqhelekileyo zokubhukuda okanye ukuzuza ubuninzi bemvelo, nangona kungasetyenziswa ngendlela ekhethekileyo ekunqumeni okanye ilahleko zokulahleka. Ukufumana ubuninzi okanye ukukhwabanisa, i-Testosterone Inanthate isetyenziswa rhoqo kumlinganiselo ophezulu (ngokuqhelekileyo ubuncinane be-500mg ngeveki), kwaye kuba anabolic steroid kunye ne-ester ende efihliweyo kuyo, iya kubonisa ixesha elide eliphakathi kwe-7 - 10 iintsuku, kwaye ngoko i-Testosterone Enanthate imijikelezo iqhutyelwa ngamaxesha e-10-12 kwiiveki okanye ngaphezulu.
Kwizinto zombini zokuqhawula kunye nokusika, i-Testosterone Enanthate ixhaphake kunye nezinye iimpawu zendalo eziza kubakhokelela ekujoliswe kuyo komsebenzisi (ukukhwaza, ukufumana ubunzima, okanye ukulahleka kwezinto). Umzekelo, I-Testosterone Inanthate cycle ngenjongo yokubhukuda ngokuqhelekileyo kubandakanya ukusetyenziswa kweDeca-Durabolin (i-Nandrolone Decanoate) kunye / okanye i-Dianabol (iMethandrostenolone), apho iDiabbolol ihlala isebenza kwiiveki ze-6 zokuqala njengeklasi yokuqala yokukhaba.
Kwimeko apho i-Testosterone Enanthate imijikelezo iyakunqumla okanye ilahleko ezilahlekileyo, i-Testosterone Enanthate ivame ukuqhutyelwa kwi-TRT ephantsi kakhulu (Testosterone Replacement Therapy) kwisilinganiso se-100mg ngeveki ngelixa ezinye iimveliso ezikhethiweyo ukuchithwa kunye nokulahlekelwa kwexabiso zigxininiswa ngexesha lojikelezo . Ukusetyenziswa kweTestonsterone Enanthate kule nto umyinge nje ukugcina umsebenzi oqhelekileyo womzimba kunokugxininisa ukuzuza nokuphucula ukusebenza.
Ziziphi iinzuzo ze-Testosterone enanthate i powder eluhlaza?
Inzuzo eyinqobo yokuncothula kukuba into enamandla kwaye inamandla nomphumo we androgenic kwaye ngokunjalo zidibaniswe neqabane le-anabolic ukunika iziphumo ezinkulu. Oku kuphinda kuvumele wonke umntu ukuba akhe imithwalo yobunzima kunye namandla kwaye nako ngaphakathi kwithuba elincinane lexesha. Ukwanda kwomeko oluqinileyo kwaye ngokukhawuleza kuhlanganiswe nokugcinwa kwamanzi njengoko kugcinwa kwamanzi kunye ne-electrolytes. Abagcini bamandla kunye nabaxhasi bempahla kunye nabo nabo beklasi elinqabileyo kakhulu bayayiqonda loo mpawu. Kwiqela elinjalo, i-testosterone enanthate, i-cypionate yiyona ephezulu ye-steroids.
Umlinganiselo we-500, i-1000 okanye i-2000 mg imihla ngemihla ayiyonto. Iimidlalo zemidlalo ezifuna umlinganiselo ophezulu wamandla angcolileyo, amandla kunye nobudlova banikeza isicelo esikhulu kwiDepot testosterone. Ukugcinwa kwamanzi kunamanye amancedo ngokunjalo. Abantu abanengxaki ngamalungu, iidiski zangaphakathi kunye neepalitiji zegulane ngenxa yoqeqesho oluqinileyo zijongene nokufumana uxolo lwexeshana ngokusebenzisa i-testosterone enanthate.
Ngenxa yobomi bemizuzu yesigxina se-testosterone enanthate, umlinganiselo we-500mg nganye iveki ingasetyenziswa ngexesha lokuqala malunga neveki ze-10 ukufumana iziphumo ezilungileyo. Ukubetha i-steroids yomlomo kumjikelezo wokuqala kukukholelwa ukuba akudingekile njengoko akunakwenzeka ukulinganisa ukuphendula komzimba kwi steroids ngamnye zisetyenzisiwe kwaye ziyazi ukuba zeziphi ezibangelwa yimiphumo emibi.
apho Ukuthenga i-Testosterone I-Enanthate powder eluhlaza kwi-intanethi?
I-Testosterone Inanthate powder eluhlaza yinto ethandwa kakhulu yi-anabolic steroid, kwaye kufuneka ifumaneka lula i-anabolic steroid emarike emnyama kungekho nzame. Kuqheleke kakhulu kwaye kulula ukuveliswa ukuba kufuneka ifumaneke kakhulu xabiso efanelekileyo. I-Testosterone Inanthate powder eluhlaza ikhona njengemveliso yamabanga amabakala e-bakala abantu, kunye nemveliso yamabanga ebhalana phantsi komhlaba (UGL) kwimarike. Ukwahluka kubonakala apha, kunye nokulawulwa kwekhwalithi yinto ebalulekileyo, kwaye i-grade testisterone Inanthate powder eluhlaza ngokuqhelekileyo iyabiza ngenxa yezizathu ezicacileyo.
I-Testosterone Inanthate powder eluhlaza zingathengwa kwimithombo ye-intanethi kunye nabathengisi, kunye nokuthengiswa kwendabuko kumntu (oko kukuthi 'abadayisi bezobugcisa'). Ixabiso liyahluka. I-Testosterone yamachiza Inanthate powder eluhlaza isenokufumaneka kwi-USD400-USD1000 / kg.Uma ukhetha i powder. Iimodeli zesampula zinokuyalelwa ukuba uvavanye loo mveliso ukuze ukwazi ukugcina ixesha elininzi kunye nemali.
Iimpembelelo zeLorcaserin: Ingaba i-Lorcaserin powder iyasebenza ngokwenene ukulahlekelwa yintlungu?	Akukho mntu uya kukuxelela i-10 inyaniso malunga ne-Trenbolone Acetate